के फाइदा हुन्छ चाइनाको इन्टरनेट नेपालमा आउदा ? यो पढ्नुहोस ! | CHALKHEL.COM
Home अचम्मका खबर के फाइदा हुन्छ चाइनाको इन्टरनेट नेपालमा आउदा ? यो पढ्नुहोस...
के फाइदा हुन्छ चाइनाको इन्टरनेट नेपालमा आउदा ? यो पढ्नुहोस !
नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबल बीचको क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंक व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । चाइना इन्टरनेटको कनेक्सनसँगै इन्टरनेटको क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकारको समाप्ति भएको हो । अब विश्वसँग नेपालको सुचना महामार्ग भारत र चीन दुबैतिरबाट सम्भव भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले इन्टरनेटमार्फत दुई देश जोडिनु नेपालको लागि समेत टर्निङ्ग प्वाइन्ट भएको बताए ।
उनले आगामी दिनमा जलविद्युत विकास र रेलवे सम्पर्कमार्फत थप सम्बन्ध बिस्तार हुने आशा व्यक्त गरे । साथै दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र चीनका बीचको संस्थागत र जनस्तरमा वृद्धि भइरहेको सुदृढ सम्बन्धले प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक, वित्तिय, व्यापार र शैक्षिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने बताए ।
सन् २०१६ मा नै चाइना र नेपाल टेलिकम दुबैले अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटीको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे पनि आजबाट चिनियाँ इन्टरनेट टेलिकमको केन्द्रीय नेटवर्कमै जोडिएर उपभोक्तामाझ पुग्नेछ । ब्यवसायिक रुपमा भारतीय सेवा प्रदायकसँग भन्दा चीनबाट किनिएको इन्टरनेट लिंक थोरै महँगो हुनेछ ।
Previous articleबारले गर्‍यो प्रधानन्यायाधीशको बचाऊ, अनसन तोड्न डा. केसीलाई आग्रह
Next articleप्रधानन्यायाधीश भन्छन्- ‘प्रमाणपत्र देखाउन आवश्यक छैन, सडकको नाराबाजीले फरक पर्दैन’